Afar Istiraad-ganacsiyeedka E-Ganacsi ee Ay Tahay Inaad Qaadato | Martech Zone
Isniin, February 4, 2019 Arbacada, Oktoobar 28, 2020 Laura Himer
Warshadaha ganacsiga elektaroonigga ah ayaa la filayaa inay si isdaba joog ah u koraan sanadaha soo socda. Sababtoo ah horumarka xagga teknolojiyadda iyo kala duwanaanshaha dookhyada wax soo iibsiga macaamiisha, way adkaan doontaa in la haysto qalcadaha. Tafaariiqleyda si wanaagsan ugu qalabaysan isbeddellada ugu dambeeyay iyo teknolojiyadda ayaa ka guuleysan doona marka la barbar dhigo dukaamada kale. Sida ku xusan warbixinta Statista, Dakhliga tafaariiqda ee ganacsiga caalamiga ah ee e-commerce wuxuu gaari doonaa ilaa $ 4.88 trillion sanadka 2021. Sidaa awgeed, waad qiyaasi kartaa sida ugu dhakhsaha badan ee suuqa uu ugu soo kici doono teknolojiyaddii ugu dambeysay.
Saamaynta Faafa ee Tafaariiqda iyo Ganacsiga E-commerce
Tafaariiqleyda Mareykanka ayaa ku socda waddo ay ku xirayaan ugu badnaan 25,000 oo dukaanno ah sannadkan sida cudurka faafa ee coronavirus kor u qaada caadooyinka wax iibsiga. Taasi waa in kabadan labanlaab 9,832 dukaammo oo xirmay 2019, sida ay sheegtay Coresight Research. Ilaa iyo sanadkaan silsiladaha waaweyn ee Mareykanka waxay ku dhawaaqeen in ka badan 5,000 oo xiritaan joogto ah.
Iyada oo ay weheliso cabsida faafa, qufulka maxalliga ah ayaa dardargeliyay wareejinta macaamiisha si ay wax uga iibsadaan khadka tooska ah. Shirkadihii loo diyaariyay ama si dhaqso ah loogu wareejiyay iibka khadka tooska ah ee internetka ayaa ku soo kordhay muddadii uu socday faafka. Mana ahan in ay u egtahay in isbedelkan dabeecadda ah uu gadaal gadaal u socon doono maadaama dukaamada tafaariiqda ay dib u furmayaan mar kale.
Aynu eegno qaar ka mid ah isbeddelada ku soo kordhay e-ganacsiga ee ay tahay inaad raacdo.
Ku dheji Deynta
The 2018 Xaaladda Ganacsi e-Ganacsi waxay ogaadeen in 16.4% shirkadaha ecommerce ay adeegsanayeen dhoofinta dhibcaha 450 dukaanno oo internetka ah. Dhoofinta dhoofintu waa qaab ganacsi oo wax ku ool ah si loo yareeyo qiimaha alaabada loona kordhiyo faa'iidooyinkaaga. Ganacsiyada leh raasamaal yar ayaa ka faa'iideysanaya qaabkan. Dukaanka internetka wuxuu u shaqeeyaa sidii dhexdhexaadiye u dhexeeya alaab-qeybiyaha iyo iibsadaha.
Erayada fudud, suuq-geynta iyo iibinta adigaa sameeya adoo maraakiibta si toos ah u sameynaya soosaarayaasha. Marka, lacag ayaad ku keydisaa rarka iyo sidoo kale, maareynta alaabada dukaanka ama kharashka ku baxa.
Qaabkan, tafaariiqleyda internetka waxay leeyihiin khatar yar iyo faa'iido fiican maadaama aad iibsaneyso badeecada kaliya marka macmiilkaagu amar bixiyo. Sidoo kale, waxay yareyneysaa qarashka kore. Ganacsatada dukaamada elektaroonigga ah ee durbaba isticmaalaya qaabkan oo samaynaya guulo waawayn waa Home Depot, Macy iyo dhawr kale.
Ganacsi khadka tooska ah adeegsada khibradaha maraakiibta ayaa celcelis ahaan kororka dakhliga ee 32.7% oo lahaa celcelis celcelis beddelid ah 1.74% sannadka 2018. Iyada oo sicirka faa iidooyinka noocan oo kale ah, suuqa ganacsiga e-commerce uu arki doono in ka badan moodooyinka dhoofinta dhibcaha sannadaha soo socda
Internetku si fudud ayaa looga heli karaa adduunka intiisa badan, laakiin iibsadayaashu waxay adeegsanayaan kanaallo badan oo ay wax ku iibsadaan. Xaqiiqdii, sida ku xusan Warbixinta Iibsiga Omnichannel, ku dhowaad 87% macaamiisha ku nool Mareykanka ayaa ah offline wax iibsanaya.
78% macaamiisha ayaa sheegay inay wax ka iibsadeen Amazon
45% macaamiisha laga iibsaday dukaan calaamadeysan oo internetka ah
65% macaamiisha laga soo iibsaday dukaanka leben-iyo-hoobiye
34% macaamiisha ayaa wax ku iibsaday eBay
11% macaamiisha waxay wax ku iibsadeen Facebook, mararka qaarkoodna loo yaqaan f-commerce.
Markaad fiiriso lambarradan, dukaameeysatadu meel walba way joogaan waxayna doorbidaan inay marin u yeeshaan alaabada ku taal barxad kasta oo ay kugu heli karaan. Faa'iidada joogitaanka iyo marin-u-helka iyada oo loo marayo dhowr marin ayaa kor u qaadi kara ganacsigaaga oo leh dakhli badan. In badan oo ka mid ah dukaamada tafaariiqlayaasha ah ayaa u weecanaya dhanka iibinta kanaallo badan… waa inaad sidoo kale sidoo kale
Kanaallada caanka ah waxaa ka mid ah eBay, Amazon, Google Shopping, iyo Jet. Kanaallada warbaahinta bulshada sida Facebook, Instagram, iyo Pinterest ayaa sidoo kale wax ka beddelaya adduunka e-commerce oo leh dalabkiisa sii kordhaya.
Daraasad laga sameeyay Baymard Institute waxay ogaadeen in kudhowaad 70% gawaarida wax iibsanayaa laga tago iyadoo 29% ka tagistu ay udhacdo nidaamka lacag bixinta oo aad u badan. Macaamiilkaaga, oo si buuxda ugu diyaarsanaa inuu wax iibsado, ayaa maankiisa beddelay nidaamka dartiis (maaha qiimaha iyo wax soo saarka). Sannad kasta, tafaariiqleyaal badan ayaa lumiya macaamiishooda sababtoo ah geeddi-socod dheer oo iibsasho ah ama hawl badan.
Sanadka 2019, tafaariiqleyda waxaa laga filayaa inay xaaladdan si habsami leh wax uga qabtaan iyada oo la adeegsanayo lacag-bixinnada fudud iyo bixinta lacag-bixinta. Tafaariiqleyda khadka tooska ah waxay qaadi doonaan tallaabo dheeraad ah si ay u horumariyaan howshooda lacag-dhigashada taasoo ka dhigeysa mid ammaan ah, fudud, oo ku habboon macaamiishooda.
Haddii aad leedahay dukaan internetka oo caalami ah iibiya, waa faa'iido inaad leedahay ikhtiyaar lacag bixin maxalli ah macaamiishaada caalamiga ah. Habka ugu wanaagsan ayaa ah inaad lacagahaaga ku xoojiso hal madal, iyadoo siinta hanaan lacag bixin ah macaamilkaaga oo dhan adduunka oo dhan.
La macaamilka macaamiishaada gaarka ah ayaa fure u ah guusha ganacsi kasta. Adduunyada dhijitaalka ah, macaamil qanacsan ayaa ah istiraatiijiyadda suuqgeynta ugu wax ku oolka badan. In lagaa heli karo kanaal kasta kuma filna, waa inaad ku aqoonsataa macmiilkaaga bar kasta oo aad siisaa daaweyn gaar ah oo ku saleysan taariikhdooda hore.
Haddii macaamil dhawaan ku soo booqday magacaaga Facebook, tusaale ahaan, uu booqanayo websaydhkaaga, sii khibradda macaamiishaas iyada oo ku saleysan la kulankii ugu dambeeyay ee ay la kulmeen. Alaab noocee ah ayaad soo bandhigeysay? Maxay ahaayeen waxyaabaha aad ka wada hadlaysay? Khibrad omni-channel ah oo aan xuduud lahayn ayaa wadi doonta kaqeybgal ballaaran iyo beddelaad.
Sida laga soo xigtay daraasadda Evergage, kaliya 27% suuqleyda ayaa isku dhejinaya kala badh ama ka badan kanaalkooda. Sannadkan, waxaad arki doontaa kor u kaca lambarkan maaddaama iibiyeyaashu ay diiradda saarayaan bartilmaameedka AI-wadista si ay ugu aqoonsadaan macaamiishooda marinnada kala duwan. Tani waxay noqon doontaa mid ka mid ah isbeddelada ugu caansan e-commerce ee 2019 ee ay tahay inaad qaadato.
Hal Talada Ganacsi ee Ugu Dambeysa
Kuwani waa afarta istiraatiijiyadood ee istiraatiijiyadeed ee ganacsiga e-ganacsiga ee la raacayo sannadaha soo socda. Inaad cusbooneysiiso tikniyoolajiyadda ayaa ah habka ugu wanaagsan ee aad ganacsigaaga internetka ku sii horumarin karto mustaqbalka. Marwalba waad qaadi kartaa talaabo hore adiga oo daboolaya baahida macaamiishaada. Hubso inaad sahamiso booqdayaashaada si aad u ogaato sida aad uga shaqeyso khadka tooska ah. Haysashada jawaab celinta waqtiga ee macaamiisha aan caadiga ahayn waxay ku siin kartaa aragti weyn oo ku saabsan heerkaaga ganacsi ee suuqa.
Tags: Amazonmachadka baymardBigCommercehabka lacag bixintadaadiyaa maraakiibtaArbacada ahiibsiga ecommerceisbeddelada ecommerceiibinta multichannelshakhsi ahaaneedPinterest
Laura Himmer waa tifaftire weyn. Aaggeeda niche waa Hagaha Suuqgeynta, Baloog gareynta dharka, Hab nololeedka iyo qorista dhiirigelinta. Iyadu waa jimicsi jimicsi waxayna jecel tahay yoga. Laura waa naag cabsi la'aan ah oo xiiso-jecel.